Selokhu abantu bokuqala landizela emkhathini, sekudlule iminyaka eminingi. Starships musa abangele kwanyakaza okunjalo, nama-pilot yabo awubonakali kumnandi namaqhawe. ngokoqobo namuhla liwukuthi kunamathuba amaningi okuthi izingane ukuba dream of oligarchs ekubeni, kunokuba osomkhathi.
Nokho, lokhu akusho ukuthi phakathi guys isiphelile nesithakazelo emkhathini. Izinkanyezi, nezakhamuzi izindiza intergalactic zisekhona ezikhanga imfihlakalo yayo ezikude. Futhi ngakho phakathi izingane, njengasekuqaleni, kuthandwa kakhulu isikhala yezandla. izandla zami siqu ngosizo abazali nothisha izingane ezibaziweyo namarokhethi kanye Saucers ezindizayo, isikhala abahloli njengabafokazi. Isikhathi esining impela izinkanyezi mayelana ezikude khumbula bangaphambi Cosmonautics Day.
Yini eyenza yezandla isikhala?
Abantu ngezandla ziphenduka zibe izinto noma emangalisayo. amabhodlela epulasitiki nephepha, ubumba kanye usawoti inhlama, lendwangu ucwecwe - noma yikuphi okubalulekile kukhonjelwe fantasy sezingcweti. UPapa kudala Starships ensimbi izingxenye umklami, ukhuni, amakhadibhodi, nomama - thunga futhi obumbene. Izingane ngokulinganayo Iyazamukela izipho ezinjalo. Futhi-ke, i-injabulo ekhethekile kubangele yezandla elula ngezandla ezibangelwa kanye nabantu abadala.
Ngokuvamile, kuqala self-yezandla on isihloko izicelo isikhala zenziwa sendwangu nephepha. Ubuchwepheshe banamuhla ivolumu izicelo kanye Quilling ezikuvumela ukuba ukwenze ezihlukahlukene izinto.
Ngaphezu kwalokho, athandwa phakathi izingane olubunjiwe ngebumba, unamathisele, usawoti inhlama. Lawa izinto zitholakala kalula futhi kulula izandla uyingane. Manje ethandwa wokuzilibazisa yezandla kusuka amabhodlela epulasitiki kanye isikhala indaba ephathwayo kutholakala uhlelo lwayo lokusebenza. Bemibono ukudala kulokhu kwaziswa ngakwesokunene akuyona nje ezihlukahlukene amamodeli we-mkhathi, kodwa futhi izakhi suit-astronaut.
Dala yezandla isikhala ngezandla iyasiza kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Inzuzo esiphezulu kufinyelelwa emsebenzini ngokuhlanganyela. Isihloko isikhala, ngaphezu kwanoma yimuphi omunye, ikhuthaza ukuthuthukiswa emcabangweni. Phela, ukudala, isibonelo, nomfokazi, ingane ithembela kuphela umcabango wakho, akugcini yinoma yimuphi imingcele. Futhi-ke, lezi futhi yimuphi omunye yezandla ewusizo izingane ukuthuthukisa emihle motor amakhono.
Futhi, uma abazali ukuthola isikhathi ukwakha lezi yezandla nezingane, osungulwe futhi ebuhlotsheni obuqine nakakhulu ukwethembana phakathi kwabo. Nakuba abasebenza yezandla abadala abakwazi kuphela aphendule imibuzo yengane noma ukulalela izindaba zakhe, kodwa futhi zimtshela kakhulu. Ngokwesibonelo, idivayisi mayelana isimiso sethu sikanozungezilanga, i-cleaner futhi "izimbobo black", amaqoqo kanye nendima yabo ezimpilweni zabantu. Astronomy, ukubhula ngezinkanyezi, i-physics, umlando - isikhala isikhala angenamkhawulo ukuxhumana kanye khathizwe uyanda.
Ungalindi isikhathi izinsuku kanye nemicimbi ekhethekile elalinikezelwe kuKhesari "inkanyezi" izingqikithi. Izingane zakho nganoma yisiphi isikhathi, bayojabula ukuba nawe ukudala yezandla isikhala ngezandla zabo. Banike le njabulo!
UMongameli Brazilian: isithombe, biography. Umengameli wokuqala Brazil
Burgers Vegetarian: zokupheka. nesitshulu patties